Izao tontolo izao ▷ arangi️ Mahita an-tserasera
Ao anaty fahasoavana tsy manam-potoana ianao izay milamina tsara ny zava-drehetra.
Ny dikan'ilay karatra «Izao tontolo izao»
La Ny tabilao manerantany dia manondro ny fahendren'ny filoham-pirenena izay mamelona ny fiainana amin'ity tontolo ity sy amin'ny tontolo rehetra. Amin'ny ankamaroan'ny birao Tarot, endrika vehivavy izy io izay nanjary fombantsika manerantany. Izy dia avy amin'ny Fomban-drazana hebreo, gnostika ary alkimika, ary hita eo anelanelan'ny lanitra sy ny tany amin'ny maha-reny mandala ny fanahy, ny vadin 'Andriamanitra, sy ny mpiaro ny hery karma izay navoakanay tety an-tany noho ny tsy fahalavorariantsika sy ny tsy fahalalantsika.
Ny taratasin'ny andriamanibavin'izao tontolo izao dia manasa antsika hanana zom-pirenena cosmic - vantany vao tsapantsika ny mety ho tanjon'ny fanahintsika amin'izany. Manambara ny fifohazan'ny fiainana tsy mety maty an'ny fanahy, tanterahina nefa tsy mila maty.
Ity taratasy ity, toa Masoandro, heverina ho tsy misy dikany ratsy na aiza na aiza no hisehoany. Raha ny axiom hermetika dia "Fantaro ny tenanao", ity sary ity dia maneho ny zavatra fantatra rehefa arahin'ny fahalalahana mamorona sy ny fahatanterahana farany ny tena toetoetran'ny tena.
Milamina amin'ny fahalalana fa mahomby amin'ny tanjonao.
Mety ho ilay litera El Mundo tmanome alalana hanao izay tianao ianao. Amin'izao fotoana izao, ny antony manosika anao dia manakaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Na dia manao fahadisoana aza ianao dia ho lasa tsara kokoa izany. Mijanona ho mavitrika ary mandrosoa hatrany.
Tsy mila manara-maso foana na manelingelina ny fahaizanao amin'ny kajy. Aza mitady ny marimaritra iraisana na fanamafisan'ny hafa fa mandihiza fotsiny. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia manehoa ny tenanao, mihetsika voajanahary ary avelao hianjera amin'izay azony atao ireo poti-javatra.
Ny zava-dehibe dia ny fikasan'Andriamanitra. Na eken'ny olombelona izany na tsia dia tsy manadino izany. Na izany aza, raha avelanao hitombo ny ego-nao, dia tsy hampiasaina intsony amin'ny drafitra lehibe kokoa ianao.